မြန်မာနည်းပညာစာအုပ်ပေါင်း (၃၀၀) စုစည်းမှု - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook > မြန်မာနည်းပညာစာအုပ်ပေါင်း (၃၀၀) စုစည်းမှု
မြန်မာနည်းပညာစာအုပ်ပေါင်း (၃၀၀) စုစည်းမှု
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 3:37 PM E-books, နည်းပညာစာအုပ်များ, မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook
ခဗျာ နည်းပညာများစုစည်းမှု ( ၃၀၀ ) အုပ်ပါခဗျာ
The Myanmar Android မြန်မာလိုစာအုပ်
၂။The IT Manager’sSurvivalGuide အင်းလိလို
( 1.50 MB ) စာမျက်နှာ - ၄၂
၅။The Myanmar's Android
၈။Adobe Illustrator CS2
( 16 MB )
၁၁။မြန်မာအင်ဂျီနီယာ နှစ်ပတ်လည် ဖိုရမ်များ (၁)
၁၂။မြန်မာအင်ဂျီနီယာ နှစ်ပတ်လည် ဖိုရမ်များ (၂)
၁၃။မြန်မာအင်ဂျီနီယာ နှစ်ပတ်လည် ဖိုရမ်များ (၃)
၁၄။မြန်မာအင်ဂျီနီယာ နှစ်ပတ်လည် ဖိုရမ်များ (၄)
အခမဲ့ Website ရေးတင်နည်း
Windows 8 ကိုလေ့လာခြင်း
( 43 . 22 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၇၂
ဒုတွဲ ရှိဝူးနော် အာ့ပဲ
Learning Guide for 3D Sudio Max ( ပတွဲ )
၁၉။Turbo C Programming အခြေခံ မြန်မာစာအုပ်
ANDROID Application ရေးသားခြင်း
Microsoft Access 2010 ဖြင့်
database Program ရေးဆွဲခြင်း
(Computer Accounting Software)
Mobile မျိုးစုံ Root လုပ်နည်း
Fruity Loop 10 နဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်
( 8 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၃၇
၂၇။ဟက်ကာလက်စွဲ ( မြန်မာပြန် )
(3. 50 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၁၅
၂၈။Micorsoft Front page 2002
mocrosoft office word 2013
( 13.5 MB )
မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် ဖမ်းဝဲ ရေးနည်း
၃၁။ကိုယ်တိုင်လေ့လာ You Tube သင်ခန်းစာ
၃၂။Android User Guide
Windows7အသုံးပြုနည်းလက်စွဲ
Skype အသုံးပြု နည်း
၃၅။Facebook အသုံးပြု နည်း
Adobe After Effects CS6 ( မြန်မာစာအုပ် )
C++ Complete Vol : 1
C++ Complete Vol : 2
C++ Complete Vol : 3
Work File ကွန်ပြူတာနှင့်ဖွင့်ရန် ( ဖုန်းနဲ့မရပါ )
http://pc.cd/b5PctalK ( rar.ဖိုင် )
၄၆။Fl Studio 10 စာအုပ်(၀င်းဟိန်း)
( 12 .5MB ) #စာမျက်နှာ - ၁၆၄
( 8 .9MB ) စာမျက်နှာ - ၁၃၂
၄၈။The Civil Engineering Handbook. APK
( စာအုပ်ဟုတ်ဘူးနော် ဆော့ဝဲ )
http://pc.cd/hFPctalK . APK
၄၉။The Civil Engineering Handbook .PDF
( 43 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၈၁၄
၅၁။Transportation Engineering Handbook
၅၂။Highway Engineering Handbook
Smart Card နည်းပညာခရီးသည်
Mobile ကွန်ယက် နည်းပညာ
Android ပေါ်မှ လက်တွေ့သုံးနည်းပညာ
i Drive များအတွက် လက်တွေ့သုံးနည်းပညာများ ( 13 .MB )
၆၃။ကို P -
iPhone 4G 3GS 3G အသုံးပြုမှု လက်စွဲလမ်းညွှန်
၆၄။iPhone တစ်လုံးကို UnLock နှင့် Upgrade ပြုလုပ်နည်း
၆၅။Laptop တစ်လုံးကို ကြာရှည်ခံပြီး လုံခြုံ စိတ်ချစေရန် နည်းလမ်းများ
၆၇။Laptop တစ်လုံး ပြု ပြင်မည်ဆိုရင်
Using Internet & E-mail Update
Wibsite လမ်းညွှန် နှင့် Facebook အသုံးပြု နည်း
ကွန်ပြူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့ တည်ဆောက် အသုံးပြု ခြင်းနှင့် အခြေခံသဘောတရားများ
ကွန်ပြူ တာ တပ်ဆင် ပြု ပြင် ထိန်းသိမ်း
Complete Network Guide
(CCNA , MCSE , MCSA , MCTS)
( 17 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၂၅
ကွန်ပြူတာအထက်တန်း အတွဲ (၁)
(9.8 MB )
၇၇။ဇော်လင်း ( YOUTH )
၇၈။ဇော်လင်း ( YOUTH )
Email နှင့် Facebook အသုံးပြုနည်း
လွယ်ကူလေ့လာ ကွန်ပြူ တာ
အဆင့်တိုးမြှင့် နှင့် ပြု ပြင်ခြင်းပညာ
ဖုန်းဖြင့် pdf ကို စနစ်တကျရေးနည်း
Learning Web Designလက်တွေ့သင်ခန်းစာများ
၈၈။Introduction to HVAC Control Systems
၈၉။Integrated Building Management System(IBMS)
၉၀။Introduction to Building Automation System(BAS)
၉၁။Introduction to Geotechnical Processes
၉၃။Notes on Home Networking
၉၅။ကိုယ်တိုင်လေ့လာ YouTube သင်ခန်းစာ
၉၆။Microstation Training Guide
၉၇။Microsoft Computer Dictionary - Fifth Edition
၁၀၀။Pile Design And Construction Practice
၁၀၁။Power Point 2010
၁၀၂။Rock Mechanics and Foundation Engineering
၁၀၄။GEO Soil Engineering testing design and remediation
၁၀၅။Stack Effect တွက်နည်း
၁၀၈။ဝင်းဒိုး ၇ တင်နည်း
၁၀၉။ဝင်းဒိုး ၈ တင်နည်း
၁၁၀။ဝင်းဒိုး ၁၀ တင်နည်း
Collection Of Civil Engineering Books And Others
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်များ နှင့် အခြား ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ စုစည်းမှု
၁၁၁။အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းအခြေခံစံနှုန်းများ(Analysis of Rates for Building Works)
၁၁၃။AutoCAD for beginners (Myanmar)
၁၁၄။Applied 3D modeling in AutoCAD – (Robert Tin Aye)
၁၁၆။Refresher Course and Field Reference Manual for Site engineers and Inspectors(U Nyi Hla Nge)
၁၁၇။Google SketchUp 8 (Myanmar)
၁၁၈။လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် သူများအတွက် နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ
၁၁၉။Architecture's Portable Handbook
၁၂၁။PRACTICAL DESIGN OF STEEL STRUCTURES
၁၂၂။BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION HANDBOOK
PHP ebook (Myanmar version)
( 1.3 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၃၆
၁၂၄။PHP လှေကားထစ်များ - ( ကိုကျော် )
၁၂၅။Bridge Engineering Handbook
၁၂၆။Reinforced Concrete Fundamental Approach 6th Edition
၁၂၇။Geotechnical Earthquake engineering
၁၂၈။Structural Steel Designer Handbook
၁၃၀။Handbook of Structural Engineering
၁၃၁။ခေတ်မီမော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာများ အပိုင်း(၁) (မင်းသိန်း-စက်မှု)
၁၃၂။ခေတ်မီမော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာများ အပိုင်း(၂)(မင်းသိန်း-စက်မှု)
၁၃၄။ ရဲမင်းအောင် (Ray Electronic)
iPhone အသုံးပြုသူများနှင့် စက်ပြင်ဆရာလက်စွဲ
( 16 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၆၇
၁၃၅။Dictionary of Architecture and Construction
၁၃၆။Building Service Handbook
၁၃၇။Building Construction Handbook
၁၃၉။Basic Structures for Engineers and Architecture
၁၄၀။Bridge Design Manual
၁၄၁။လုပ်ငန်းခွင် အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး လက်စွဲစာအုပ်
၁၄၂။Easy Steel Structural Properties and Design Book
၁၄၃။revit and 3Ds max .RAR (၅)အုပ်
၁၄၅။Construction Equiment Management for Engineers, estimators and Owners
၁၄၆။Construction Project Management
၁၄၇။Construction Scheduling and Control
၁၄၈။Structural Foundation Designers Manual
၁၄၉။Handbook of Structural Steel Connection Design and Details
၁၅၀။Reinforced Concrete: A fundamental Approach
၁၅၂။Civil Engineering Reference Manual for PE exam
၁၅၃။Analysis of Rates for Building Works
၁၅၄။Analysis of Rates for Airfield Works
၁၅၅။Estimating for builders & surveyors
၁၄၆။Estimating in Building construction
၁၅၇။Handbook of Reinforced Concrete And Detailing
၁၅၈။Theory And Practice Of Foundation Design
၁၅၉။Revit Architecture 2010 Vol 1
Revit Architecture 2010 Vol 2
၁၆၀။AutoCAD 3D ( Robert Tin Aye)- Myanmar
၁၆၁။Learning Guide for 3D Studio Max –Myanmar
၁၆၂။SketchUp User’s Guide
၁၆၃။V-ray for SketchUp Manual
၁၆၄။Google SketchUp for Site Design
၁၆၅။AutoCAD 2010(Robert Tin Aye)
၁၆၆။Civil Engineering Formulas Pocket Guide
၁၆၇။Structural Engineering formulas
၁၆၈။Standard specifications for Highway Construction Volume 1
၁၆၉။Standard specifications for Highway Construction Volume 2
၁၇၀။General Specification for Building Maintenance Works in Residental Building
၁၇၁။General Specification for Building Volume 1 of 2
၁၇၂။General Specification for Civil Engineering Works Vol2of 2
၁၇၃။Structure as Architecture
၁၇၄။Masonry and Concrete for Residential Construction
၁၇၅။Structural Engineer’s Professional Training Manual
၁၇၆ဝDesign of Concrete structure
၁၇၇။Concrete Construction Engineering
၁၇၈။Advanced Methods of Structural Analysis
၁၇၉။Basic Civil Engineering
၁၈၀။Structural Engineer's pocket book
၁၈၂။Reinforced Concrete (Design Theory & Examples)
၁၈၃။3D studio Max (Myanmar)
၁၈၄။2600 HATCH AutoCAD Hatch Textures
၁၈၆။Google SketchUp Blocks
၁၈၇။Google SketchUp Crack files(x32x64)
၁၈၈။Yellow Books(Excel files)
၁၉၀။Basic Ship Theory Volume 1
(4. 50 MB ) စာမျက်နှာ - ၄၀၀
၁၉၁။Basic Ship Theory Volume - 2
၁၉၂။Guide To Ship Repair Estimates
Joomla website အတွက်အခြေခံပြင်ဆင်မှုများ နှင့် Google apps နှင့် Domain Name ချိတ်ဆက်ခြင်း
၁၉၆။Networking ဘာသာရပ်ကြီးကို ရှင်းလင်းနိုင်ရန် မရည်ရွယ်ပါ။
မိမိတို့ ရုံး၊ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ Computer အနည်းငယ်ကို ချိတ်ဆက်၍ File နှင့် Printer များကို ဝေမျှ သုံးစွဲနိုင်ပါရန် Networking အတွေ့အကြုံ မရှိသူများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါစေရန် ရေးသားထားပါတယ်။
စာအုပ်အမည် - Notes on Home Networking
စာရေးသူ - Book-Shelf Admin Team
( 1.6 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၅
၁၉၈။Adobe PageMaker 7.0 မှာ Unicode Font သုံးလို့ မရပါဘူး။PageMaker လို DTP နဲ့ Unicode သုံးလိုသူများအတွက်
စာအုပ်အမည် - Adobe InDesign CS3
စာရေးသူ - ကကကွန်
စာမျက်နှာ - ၁၇၂
အရွယ်အစား - 21 MB
၁၉၉။Android Programming ကို စတင်လေ့လာလိုသူများအတွက် -
Java, C, C++, C# စတဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် ဤစာအုပ်တစ်အုပ်တည်း ဖတ်မိရုံနဲ့ Android Programming အကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်။
Author: Michael Burton, Donn Felker
( 42.3 MB ) စာမျက်နှာ ၄၀၈
၂၀၀။A complete preparation guide for the entry-level networking CCNA certification.
Title: CCNA Certification All-In-One For Dummies
( 68.6 MB ) စာမျက်နှာ ၁၀၀၈
၂၀၁။Computer Networking ကို လေ့လာလိုသူများအတွက်
Title - Cisco Router Configuration Handbook
Author - David Hucaby
( 7.62 MB ) စာမျက်နှာ ၆၄၁
၂၀၂။Computer Hardware နှင့်ပတ်သက်လို့ လေ့လာနိုင်ပါရန်
Title - A+ Certification Bible
Size - 36.1 MB
၂၀၃။ကွန်ပျူတာ စာရင်းကိုင်ပညာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါရန် -
Title - Peachtree Accounting
Author - ဝေဖြိုးအောင်
( 5.07 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၇၀
၂၀၄။ဗွီဒီယို တည်းဖြတ်မှု အတွက်
Keith Underdahl - Adobe Premiere Elements For Dummies
( 14.5 MB ) စာမျက်နှာ ၃၈၅
၂၀၅။CSS for windows 8 App development
(7.5MB ) စာမျက်နှာ - ၃၀၁
၂၀၆။You Can Program in C++
(4. 50 MB ) စာမျက်နှာ - ၃၈၇
၂၀၇။C++ Complete Vol 3
ဆရာ အောင်မြင့် ရေးသားထားသော C++ ရေးသားနည်း စာအုပ်လေးပါ.. ဒီကောင်လေးကတော့ အမှတ် ၃ ပဲဖြစ်ပါတယ်။။။
C++ Programming ဘာသာရပ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ လေ့လာနိူင်ပြီး ထူးချွန်သော programmer တွေအဖြစ်သို့ လျှောက်လှမ်းနှိုင်ကြပါစေလို့ သယ်ရင်းတို့ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ စာအုပ်စင် မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ
၂၀၈။Easy iDevice GuideBook (သူငယ်တန်း Apple ဖတ်စာ)
ကျွန်တော်တို့ အကိုကြီး ဆရာ ကိုနေဇာအောင် (ကိုမိုးသိကြား) ရေးသားထားသော I Device အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုနည်းပညာ ရှာမှီးသူတွေအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြနဲ့ အကူအညီများစွာပေးခဲ့သော ဆရာ မိုးသိကြား ကိုလဲ ဒီနေရာလေးကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပါရစေခင်ဗျ...
Fully Respect ပါ ဆရာရေ
( 11 . 1 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၂၉
၂၀၉။WEB DESIGNER'S GUIDE TO ADOBE PHOTOSHOP
padonma ဖိုရမ်မှ Chris Tull လေးပြုစုရေးသားပေးထားသော ဖိုတိုရှော့ ဖြင့် ၀က်ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲနည်း အခြေခံစာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်ရေးသားပေးသူ chris tull လေးကိုရော နည်းပညာတွေ အဆင်အမြဲ ဖြန့် ဝေပေးနေတဲ့ padonma ဖိုရမ်ကိုရော ဒီနေရာလေးကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပါရစေခင်ဗျ..........
( 12 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၂၂
၂၁၀။အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက် အသိပေးချက် ၈ ချက်
အင်တာနက် အသုံးပြုသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့အချက် ၈ချက်ပါ....
မူရင်းရေးသားသူကိုလဲ ကျေးဇူးအထူုးတင်ရှီပါကြောင်း ဒီနေရာလေးကနေ ပြောပါရစေခင်ဗျ...
( 658 KB ) စာမျက်နှာ - ၁၃
၂၁၁။Learning Web Design, Web Design လက်တွေ့ သင်ခန်းစာများ
ဆရာ ဦးသောင်းဝင်း (ပန်းချယ်ရီ) ရေးသားထားသော web design အသုံးပြုနည်းနှင့် သင်ခန်းစာများ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
၂၁၂။Basic PHP Tutorial
ဆရာ ကိုတင်ထွန်းလွင် ရေးသားထားသော Php အသုံးပြုနည်း အခြေခံစာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
( 909 KB ) စာမျက်နှာ - ၈၃
( ၃၁ ) အုပ်
ရာစုသစ် အခြေခံ အီလက်ထရွန်းနစ်
ခေတ်မှီ မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာများ အပိုင်း (၁)
၃။အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ကြိုးသွယ် ဆားကစ်ပတ်လမ်းများ ဦးအုန်းမြိုင်(လျှပ်စစ်)
ခေတ်မှီ မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာများ အပိုင်း (၂)
AC မှ DC သို့ DC မှ AC သို့
လျှပ်စစ်မော်တာပြု ပြင်နည်း နှင့်
၈။စက်မှုအီလက်ထရောနစ် - ဆရာဦးတင့်ဇော်
Ventilation (Volume-1) မြန်မာလို
၁၀။အင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ - ဦးကျော်နိုင်
၁၁။အံ့ဖွယ်လျှပ်စစ် ( စာပေဆုရ )
၁၂။ROBOTICS FOR BEGINNER
၁၃။The essential guide of Automation & Control
( 18 .5MB ) စာမျက်နှာ - ၂၉၀
၁၄။Circuit protection and control devices 0.5 to 6300 A
(6.5MB ) စာမျက်နှာ - ၇၆
၁၅။The essential guideof Control Panel
( 21 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၁၆
၁၆။AC Transmission and Distribution
၁၇။Electrical Knowledge မြန်မာလို
၁၉။Motor Losses မြန်မာလို
၂၀။Analog meter ဖြင့် Resistor တိုင်းနည်း(၁)
၂၃။Power Factor 1 to4(မြန်မာလို)
၂၄။ELCBRCD 1 to5(မြန်မာလို)
၂၅။PFPFC Written by Aye Thwin( မြန်မာလို )
၂၆။EFY Enterprises Pvt Ltd ဧ။် Simple Projects you can make at home
( 24 . 44 MB )
၃၁။မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ EFI အင်ဂျင်နှင့် ကွန်ပြူတာထိန်းချုပ်စနစ်
ဗွီဒီယို နှင့် ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက် ၅၁ အုပ်
၁။Adobe Photo Shop CS
(5.5MB ) စာမျက်နှာ - ၁၆၂
( 12 MB ) စာ - ၆၄
၆။Adobe Photo Shop CS6 အသုံးပြုနည်း
၇။ADOBE PHOTOSHOP CS6 အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
( 11 .16 MB ) စာမျက်နှာ - ၇၅၇
Adobe Photo Shop 7.0
( 28 .55 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၉၃
၉။Adobe Photo Shop 7.0
ADOBE PHOTOSHOP DESIGN TUTORIALS
Graphic Designer များအတွက် ဖိုတိုရှော့
( 8 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၂၇
၁၉။Adobe Lightroom အသုံးပြုနည်း(၁)
၂၀။Adobe Lightroom အသုံးပြုနည်း(၂)
၂၁။Adobe Lightroom အသုံးပြုနည်း(၃)
ဓာတ်ပုံပညာကို စတင်လေ့လာနေသူများအတွက် သိထားသင့်သောအချက်များ(၁)
အမှောင်ကျကျ အရိပ် မဲမဲ ပုံရိပ် ရိုက်ကူးခြင်း။
၂၄။25 Photo Tips For Beginner
၂၅။Web Designer Guide Adobe PhotoShop
( 12 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၂၂ ( မြန်မာလို )
၂၆။Auto Focus ထက် Manual Focus ကိုသုံးသင့်သည့်အခြေအနေများ
DSLR Metering အကြောင်း သိကောင်းဖွယ်ရာ
PHOTOSHOP NOTES(1) ဖိုတိုရှော့မှတ်စု(၁)
PHOTOSHOP NOTES(1) ဖိုတိုရှော့မှတ်စု(၂)
Cs/CS2/CS3/CS4/CS5 များမှာသုံးတဲ့ TOOL များအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါသည်
( 8 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၆၇
Portrait ရိုက်ကူးရေးဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ
Rule of Thirds ကိုချိုးဖေါက်ခြင်း
Single Point Focusing နှင့်ပတ်သက်၍သိရှိသင့်သည့် အချက်များ။
Understanding Histogram, Raw & Jpeg...!
ဓါတ်ပုံ မှာ Noise ဘာကြောင့် ပေါ်လာရသနည်း
၄၅။ဓါတ်ပုံ၏ ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေသ (Photo Composition Rules)
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကိုဖွဲ့စည်းရာတွင်အလွန်အရေးပါသည့် Leading Lines
အကောင်းဆုံး Focus ဖြစ်လာစေဖို့ ဆောင်ရွက်ရန် http://pc.cd/uG9ctalK
၅၁။ ဗွီဒီယို တည်းဖြတ်မှု အတွက်
LMA)sybex ccna rs
( 39 . 64 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၁၇၈
LMA)Cisco Certified Network Associate Version2(200-120)
LMA)Computer_Science.pdf;filename UTF-8''Computer Science
(6. 19 MB ) စာမျက်နှာ - ၆၂၄
LMA)Barron_s_AP_Computer_Science_7E_2015.pdf;filename= UTF-8''Barron_s AP Computer Science 7E, 2015
(6. 44 MB ) စာမျက်နှာ - ၅၀၈
မြန်မာနည်းပညာစာအုပ်ပေါင်း (၃၀၀) စုစည်းမှု Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:37 PM Rating:5နည်းပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ချင်သူများအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ် ခဗျာ နည်းပညာများစုစည်းမှု ( ၃၀၀ ) အုပ်ပါခဗျာ ၁။ဆန္ဒီ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 3:37 PM